Izixhobo zovavanyo -Shandong Topower Pte Ltd.
Izixhobo zovavanyo / h1>
Inkampani yethu inezo zonke iintlobo zezixhobo zovavanyo lobungcali
Cold ityumza amandla (CC):
Ibhekisa kubuchule bemveliso ukumelana noxinzelelo lwangaphandle kubushushu begumbi. Ukuba i-Refractory ayinamandla ngokwaneleyo, ukukwazi kwayo ukumelana noxinzelelo lwangaphandle koomatshini kuncitshisiwe, okuya kuthi kukhokelele ekuqhekekeni ngexesha lokusetyenziswa kunye nolwakhiwo.
Imodyuli yophuko (MOR):
Ibonisa amandla emveliso ukuxhathisa ukugoba. Beka isampuli kwinkxaso kwaye uyilayishe kwinqanaba elithile kude kube kwiziko lesampulu. Emva koko amandla e-flexural abalwa ngobubanzi besibiyeli; umthwalo kunye nendawo enqamlezayo yesampulu xa isaphuka.
Ibhekisa kwipesenti yevolthi evulekileyo yemveliso evulekileyo kwimveliso yokuphikisa kumthamo opheleleyo wemveliso. Kwizinto ezishinyeneyo, ii-pores ezisezantsi, kokukhona kuya kubakho ubunzima. Kwangelo xesha, izitena ezisezantsi ze-porosity zinokuthintela ngokufanelekileyo ukungena kwegesi eziyingozi ngexesha lokusetyenziswa.
Ukuphinda ubambe kwakhona phantsi komthwalo (RUL)
Ibonisa uxinzelelo lokugqibela lwemveliso ngokuchasene nokugoba kubushushu obuphezulu obuthile, obuhlala busetwe kwi-1000 ° C; 1200 ° C kunye ne-1400 ° C. Beka isampuli kwinkxaso kwaye uyilayishe kwinqanaba elithile kude kube kwiziko lesampulu. Emva koko amandla e-flexural abalwa ngobubanzi besibiyeli; umthwalo kunye nendawo enqamlezayo yesampulu xa isaphuka.
Ibhekisa kukuhlengahlengiswa kwezinto ezixineneyo njengoko ubushushu bonyuka phantsi komthwalo othile. Elona zinga liphezulu lovavanyo yi-1700 ° C. Ukuphakama kobushushu bokulayisha, kokukhona amandla okuxhathisa amaqondo obushushu aphezulu.
Ukuxhathisa kukothuka obushushu (TSR):
Ibhekisa kwimpixano ebangelwe kukutshintsha okukhulu kweqondo lobushushu, oko kukhokelela ekuqhekekeni okanye ekuqhekekeni kwento leyo, ngakumbi izinto ezinobunzima. Izinto ezichasayo kufuneka zibe nobunzima obaneleyo bokumelana nokutshintsha okuqhelekileyo kwiziko kumaqondo obushushu aphezulu. Ukuba ubunzima abonelanga, loo nto iya kuqhekeka okanye i-headshot.